2013-May donation plan (37th monthly donation) « One Dollar Fund – Myanmar (ODF Myanmar)
2013-May donation plan (37th monthly donation)
We would like to announce that ODF Myanmar has chosen, as the place for 2013-May (37th monthly) donation plan, “Yadanar Mon Youth Academy” monastic education centre located in Taung Yin, Kyaukphyu township, Rakhine State, Myanmar.
It was established as an official monastic education center in 2011. Under the guidance of the Venerable Sayadaw U ZaWaNa , the school is the place where the nearby poor children are being provided with educational aids. For 2012-2-13 academic year, the school took care of total 72 students- 37 for primary, 28 for secondary and 8 for high school.
In Myanmar, the Buddhist monastic education system takes responsibility for some portions of the government education system during recent years, just the same way it took full responsibility for the national education in the past.
Therefore, we would like to encourage our friends and donors, who are willing to offer hands as much as they can to those in need, to cooperate with us in contributing for 2013-May donation.
Please be informed that donations will be collected till 9th June, 2013 (Sunday). Donations can be made through ODF volunteers (http://odfmyanmar.org/volunteers/) or to ODF Bank Accounts (Singapore, Myanmar). Detailed information for bank accounts and addresses can be found at our website http://odfmyanmar.org/donate.
ODF Myanmar ၏ ၂၀၁၃ မေလ အလှူ (၃၇ ကြိမ်မြောက် လစဉ်အလှူ) အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူုမြို့နယ်၊ တောင်ရင်းရပ်ကွက်ရှိ ရတနာမွန် လူငယ်အကယ်ဒမီဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းအား လှူဒါန်းရန် ရွေးချယ်ထားပါသည်။
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင်နှစ်မှ စတင်၍ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းအဖြစ် ဖွင့်လှစ်ထားသော အဆိုပါကျောင်းသည် ဆရာတော်ဦးဇဝန၏ ကွပ်ကဲမှုဖြင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျောင်းသားများအား ပညာသင်ကြားပေးနေပါသည်။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်တွင် ဆရာမ ၄ ယောက်ဖြင့်၊ မူလတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူ ၃၇ ယောက် ၊ အလယ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူ ၂၈ ယောက် ၊ အထက်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသ ၈ ယောက်၊ စုစုပေါင်း ကျောင်းသားကျောင်းသူ ၇၂ ယောက်အား ပညာသင်ကြားပေးနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှေးခေတ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ပညာရေးသည် အမျိုးသား ပညာရေးကို တာဝန်ကို အပြည့်အဝ ယူခဲ့သလို ယခုခေတ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများသည်လည်း နိုင်ငံတော် ပညာရေး၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို တာဝန်ယူလျက်ရှိပါသည်။ မိဘမဲ့ကလေးများ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်သော စားဝတ်နေရေး အပြင် ပညာရေးကိုပါ တွဲဖက် ထောက်ပံ့ပေးသော ကျောင်းများသည် အထူးအရေးပါလှပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် အဆိုပါလိုအပ်ချက်များအား တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အားဖြည့်ကူညီလိုသူ မိတ်ဆွေများ ၊ အလှူရှင်များအား မိမိတို့နှင့် လက်တွဲ၍ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလ အလှူတွင် ဝိုင်းဝန်းကူညီကြရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
အလှူငွေ များကို ၂၀၁၃ ဂျွန်လ ၉ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) နောက်ဆုံးထား၍ လက်ခံပေးမည့်အကြောင်းကိုလည်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ အလှူငွေများကို ODF Volunteers http://odfmyanmar.org/volunteers/ များမှ ဖြစ်စေ၊ ODF Bank Accounts (Singapore, Myanmar) သို့ ဖြစ်စေ လှူဒါန်းနိုင်ပြီး ဘဏ်စာရင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အသေးစိတ်ကို http://odfmyanmar.org/donate တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။